The Huawei MediaPad M6 Turbo Edition na-eru abata | Gam akporosis
Nke a bụ Huawei's MediaPad M6 Turbo Edition, mbadamba nkume a na-achọ inye maka ire ere
N’etiti ọnwa Juun, Huawei weputara mbadamba smart smart ya kachasị ike. Nke a bụ Mgbasa ozi MediaPad M6 na, dị ka na-atụ anya, ọ na-emi odude ke n'elu ya nke ekele niile ike na-akwado site na HiSilicon Kirin 980 si ụlọ ọrụ, ndị isi-isi SoC na ike iru a kacha elekere ugboro nke 2.6 GHz na-abịa kwajuru na Mali-G76 iri na abụọ-isi 720 MHz GPU.
Ugbu a, onye nrụpụta China nwere mbipụta pụrụ iche nke a nke na-abịa n'okpuru aha Mpempe akwụkwọ MediaPad M6 Turbo. Nke a na-abịa nwere ụfọdụ mgbanwe n'ọkwa mara mma, na nkọwa ndị a niile n'okpuru.
Site na netwọk mmekọrịta Weibo, Huawei kwupụtara na malite echi mbadamba nkume ahụ ga-adị na atụmatụ ịre ere na Chinan'otu oge ahụ ka o nyere akwụkwọ ọkwa ya iji kwado ọkwa ahụ. Na nke a enwere ike ịhụ na ọ na-eji mma mara mma karịa nke ụdị mbụ. Dabere na ngalaba azụ, ọ na-ebu gradient na akara n'ụdị "X" nke na-echetara anyị Honor 9X, yana ederede "Byda Site Harman / Kardon" nke na-eme ka anyị kwenye na ọ nwere ndị ọkà okwu ka mma.
Akwụkwọ mmado na-egosikwa nke ahụ mbadamba nkume nwere bọtịnụ ọzọ n'akụkụ n'akụkụ na mgbakwunye ụda rocker na bọtịnụ ike. O yiri ka ọrụ ya ọ bụ ime ka ọnọdụ "Turbo" rụọ ọrụ, nke ga-abawanye arụmọrụ mgbe ị na-agba ngwa dị arọ, na-achọ ọ bụghị egwuregwu na-achọsi ike na ndị ọzọ.
Ezumike ahụ, na MediaPad Me Turbo Edition na-ejigide atụmatụ na nkọwapụta ọrụaka nke anyị maraworị na MediaPad M6. A ga-enye naanị nke a na nha ihuenyo 8.4-inch. Ọ ga - enwe Kirin 980 hotara na mbụ yana 6GB nke LPDDR4x RAM na 128GB nke nchekwa nchekwa (ruo 512GB max). Na aka ya, o gha ebu batri ikike nke 6,100 mAh, kamera azu 13 MP na kamera n'ihu nke 8 MP.
Abịa na Wi-Fi na 4F LTE iche iche. Nke mbu dị ọnụego 2,699 yuan (~ 340 euro ma ọ bụ $ 377), ebe ụdị 4G LTE dị ọnụego 2,999 yuan (~ euro 378 ma ọ bụ $ 419). Enwere ike ịgba ha akwụkwọ na Vmall.com na JD.com.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ Huawei's MediaPad M6 Turbo Edition, mbadamba nkume a na-achọ inye maka ire ere
Apple Music ga-enye nkwado maka Chormecast na mmelite na-esote